Saka oo ka hadlay Arin ay ka wada hadleen isaga iyo da’yarka Smith Rowe | Warkii.com:-world news today for international news and videos from Europe, Asia, Africa, the Middle East and the Americas.
Home Ciyaaraha Saka oo ka hadlay Arin ay ka wada hadleen isaga iyo da’yarka...
Saka oo ka hadlay Arin ay ka wada hadleen isaga iyo da’yarka Smith Rowe
Da’yarka Arsenal Bukayo Saka ayaa qirtay inuu ka hadlay goolkii uu ka dhaliyay Tottenham kulankii North London derby isaga iyo saaxiibkiis Emile Smith Rowe ciyaarta ka hor.
Ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed aad u fiican qeybtii hore ee Arsenal , halkaasoo ay 3-0 kaga badiyeen kooxda ay xafiiltamaan ee Premier League Axadii.
Smith Rowe ayaa Arsenal u daah furay goolasha , ka hor inta uusan Pierre-Emerick Aubameyang goolka labaad raacin. Gunners ayaa ciyaarta ku badisay 3-1.
“Shalay waxaan ka hadalnay arrintan,‘ Bal qiyaas sida ay dareemi doonto in goolal laga dhaliyo waqooyiga London derby, ”Saka ayaa yiri, mareegaha kooxda.
“Markii Emile dhaliyay goolkii ugu horreeyay, isaga uun baan eegay oo waxaan xusuusannay sheekada. Markii aan gool dhaliyey, mar kale ayuu i eegay waxayna ahayd dareen aad iyo aad u qaas ah labadeenaba inaan ku sameyno garoonkan sidoo kale .
“Waxay dareemeysaa inay aad u fiican tahay inaan la wadaago daqiiqadda, xitaa haddii uu gool dhaliyo ama aanan dhalin, weli waan ku farxi lahaa isaga laakiin waxa ugu muhiimsan ayaa ah inaan badinnay oo aan helnay saddexda dhibcood qof walbana uu aadi karo gurigiisa isagoo faraxsan.
Previous articleMadaxweynaha Real Madrid Perez oo shil baabuur galay
Next articleMaxay tahay arrinta uu Cabdikariin Guuleed sheegay in Farmaajo uu ka baqayo?